Housing Choices Survey - Somali
Housing Choices (Dookhyada Guriyaynta waa) dadaal cusub oo ay wado City of Seattle kaasoo diirada lagu saaraayo abuurista dookhyada guryo suuq jaban oo badan, lagana dhisayao meelo badan, si ay dad badan guryo uhelaan. Shaqada waxa lagu fulinayaa wada shaqayn lala samaynaayo Affordable Middle-Income Housing Advisory Council (Gudiga Katalo bixinta Guryo Qiimo Jaban oo ay awoodaan Dadka Dabaqada dhexe) kaasoo shaqadiisu tahay aqoonsiga qaabab lagu abuuri karo guryo badan oo kiro ah iyo kuwo badan oo la iibsan karo kuwaasoo ay iibsan karaan dadka reer Seattle ee qaata mushaarka dabaqada dhexe. Macluumaad dheeri ah oo kusaabsan mashruuca Dookhyada Guriyaynta waxaad kahelaysaa webseetkeena oo ah.
Xog aruurintu waxay qaadanaysaa kudhawaad 10 ilaa 15 daqiiqo. Waad kumahadsan tahay galinta waqtigaaga si aad macluumaad usiiso dadaalkaan. Macluumaadka aad dhiibato ayaa naga caawin doona talaabooyinka mudada dhaw iyo sidoo kale talooyinka mudadada fog oo aan filayno inaan soo bandhigi doono biloowga sanadka 2020.
Bayaanka Diidmada iyo soobandhigida macluumaadka bulshada
Sida waafaqsan Xeerka Diiwaanada Dadwaynaha,dhamaan waxyaabaha kuxeeran magaalada ayaa lagu soo bandhigi karaa codsiga dadwaynaha Farqada 42.56 RCW, ayadoo bixinaayo ama lasiinaayo nuqul.Diiwaanada waxaa kamid ah kaliyana kuma eka warqada saxiixa, heshiiska, iimaylka, ogeysiiska, iswaydaarsiga warqadaha, iwm.Isticmaalka liiska shaqsiyaadka ama macluumaadka barta (oo ay kujiraan ciwaaanka, taleefanka ama Iimaylka) waxaa laga yaabaa inaan loo ujeedo ganacsi.
* 1. Hadda miyaad kunooshahay Seattle?